Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Kurapwa Kutsva Kwekufuta
Sciwind Biosciences Co., Ltd., kambani yekiriniki-nhanho biopharmaceutical yakatarisana nekutsvaga nekugadzira nzira itsva dzekurapa chirwere chemetabolism, nhasi yakazivisa kutangwa kwedosing yevarwere muchikamu chayo chechipiri chekiriniki yeXW2 muvarwere vane kufutisa.
XW003 ibhuku, rinogara kwenguva refu glucagon-sepeptide-1 (GLP-1) analogi yakagadziriswa paSciwind Bioscience. Yakaratidzwa kuva yakachengeteka uye inoshivirira zvakanaka, uye yakakonzera kuderedzwa kwedosi-inotsamira uremu mumakiriniki ekutanga miedzo.
Iyo yakawanda-center, randomized, open-label, active-controlled Phase 2b yekuedza inoronga kuongorora kamwe-vhiki nevhiki subcutaneous administration yeXW003 mune vanenge 200 varwere vane kufuta. Vatori vechikamu mukutongwa, iyo iri kuitwa muAustralia neNew Zealand, ichabatwa nemishonga yekudzidza kusvika kumavhiki e26, inoteverwa nevhiki-5-vhiki yekutevera-isina nguva yekutevera. Chinangwa chechidzidzo ndechekuongorora kuchengetedzwa, kushivirira, uye kurapa kwakanaka kweXW003 muvarwere vakafuta. Nhamba yepamusoro-soro inotarisirwa muchikamu chechipiri che 2022. Mukuwedzera, sechikamu chepurogiramu yose yekuvandudza yeXW003, kuedza kwakasiyana kune varwere vechiChinese vane kufutisa kuri kuitikawo.
"Tinofara zvikuru kuenderera mberi nekukurumidza kweXW003 kuburikidza nekuvandudzwa kwekiriniki. Kutanga kwekuita dosing yevarwere munzvimbo iyi yakawanda, ongororo yepasi rese yekurapa kufutisa ndechimwe chiitiko chakakosha kukambani uye chiratidzo chakasimba chekuzvipira uye kugona kwechikwata chedu, "akadaro Dr. Hai Pan, muvambi uye CEO weSciwind. "Takazvipira kuenderera mberi nekuvandudzwa kweXW003, pamwe nevamwe vanotora zvinodhaka mupombi yeSciwind, yekurapa zvirwere zvemetabolic, zvinosanganisira kufutisa, chirwere cheshuga, neNASH."